1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM fiber ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM ဖိုင်ဘာ
1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM ဖိုင်ဘာ
1590nm DFB လေဆာရောင်ခြည် diode Pigtailed SM fiber သည် DFB လေဆာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်မှုထိရောက်မှုအတွက်တိကျစွာချိတ်ဆက်ထားသောဖိုင်ဘာပွတ်တိုက်အားရှိသည်။ ၁၅၉၀nm အလယ်ဗဟိုလှိုင်းအလျားဗားရှင်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁.၅ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လွှတ်နိုင်သောစွမ်းအင်ရှိပြီးနောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ဖိုဒီဒီဒီဒ်ပါ ၀ င်သည်။ 9/125 singlemode fiber pigtail သည် FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC style fiber optic connector နှင့်အဆုံးသတ်သည်။ လျှောက်လွှာများတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့်ကိရိယာများနှင့်လေဆာရောင်ခြည် diode light source လိုအပ်သည့် optical တူရိယာများပါ ၀ င်သည်။
1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM ဖိုင်ဘာ၏အကျဉ်းချုပ်
1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM ဖိုင်ဘာ၏နိဒါန်း
3.9090 nm DFB လေဆာ Diode Pigtailed SM ဖိုင်ဘာ၏ထူးခြားချက်များ
built-in မော်နီတာ photodiode ။
4. 1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM fiber ကိုအသုံးပြုခြင်း
1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM ဖိုင်ဘာ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â 'ƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1580 1590 1600 nm
6. Package drawing & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM fiber
၇။ ၁၅၉၀nm DFB လေဆာရောင်ခြည် diode Pigtailed SM fiber ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1590nm DFB လေဆာ diode Pigtailed SM fiber, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်စက်, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော